ဖူးေျမာ္ဖို႔ခဲယဥ္းလွ​ေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕အံေတာ္ – ပဒေသာ
ကံထူး လို႔ဖ်ာပုံသူဖ်ာပုံသား မ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ တစ္ျပည္လုံးမွာရွိတဲ့ ဖူးခ်ိန္တန္ ဖူးထိုက္လို႔. ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရလို႔ ထင္ပါၿပီ။ကြၽန္ေတာ္ ကေလး ဘဝတည္း က ဘိုးဘိုး ၊ဘြားဘြား၊ဘိုေဘး အစဥ္အဆက္ ကတည္း က ဖ်ာပုံမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား အံ့ေတာ္ ႏွင့္ ဆံေတာ္တစ္ ဆူ ကိမ္းဝပ္ေနတယ္ လို႔ သိခဲ့ရပါတယ္။လူအမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ သင့္ကို လက္ခံဖို႔ ခ်စ္ခင္ဖို႔ ဆိုတာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္- မလိုအပ္ဘူးထင္ၿပီး သင့္ ရဲ႕ဆက္ဆံပုံ ဆက္ဆံနည္း လြဲမွားသြားခဲ့ရင္ေတာ့ သင္ မိတ္ပ်က္ပါၿပီ- ဒါေၾကာင့္ ဒီ ဗီဒီယိုေလးကိုသာ ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္လိုက္ပါဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အံေတာ္ေရွးေဟာင္းသမိုင္းအစဥ္ အလား အရ ေရွးက်တဲ့ ၿမိဳ႕ေတြက အမည္ႏွစ္လုံးတည္း နဲ႔ အမည္ေပးခဲ့တဲ့ တခ်ိန္က မြန္ေဒသေတြေပါ့။
ပုဂံ၊ရန္ကုန္၊တြံေတး၊ဒလ၊သထုံ၊ဖ်ာပုံ၊ပုသိမ္၊စတဲ့ ေရွးက်တဲ့ ၿမိဳ႕ေတြ အမ်ားႀကီးေပါ့။အဲအထဲမွာ မြန္ဘုရင္မ်ား အဆက္ဆက္ အုပ္စိုးခဲ့တဲ့ ဖ်ာ ပုင္း ဆိုတဲ့ ထမင္းေဈးၿမိဳ႕ကေလး တစ္ခုလည္း ပါဝင္ခဲ့တာေပါ့။က်ိဳက္ပတိုင္း ေစတီ ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ျမန္မာ သကၠရာဇ္(၆၀၀)ခုႏွစ္မွာ တည္ထားကိုး ကြယ္ခဲ့တယ္။လုပ္ဥကုန္က်ိဳက္ခမြမ္ ေစတီေတာ္ကို ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၉၀၀)ခုႏွစ္ မွာ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံ လုံးမွာ ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေပါင္း မ်ားစြာမွာ ခေရပင္ေဇာက္ထိုးပါက္တဲ့ ၿမိဳ႕ဆိုလို႔ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ပါဘဲ။ဖ်ာပုံက ေရွးဘုရင္ေတြ အဆက္ဆက္ အုပ္စိုးခဲ့စဥ္ က ရန္ကုန္၊ဒလ အပိုင္းေပါ့။ဖ်ာပုံကို မြန္ဘုရင္ အဆက္ဆက္ က ေအာင္ေျမ လို႔ သက္မွတ္ခဲ့ၾကတယ္၊
ယုံၾကည္ခဲ့ၾကတယ္။ဖ်ာပုံကို မင္းေဘးေရေဘးအစရွိတဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္အေပါင္းမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ ကင္းေဝးေစရန္အတြက္ ေရွ႕ထုံးနန္းစဥ္လာအရ ။ဖ်ာပုံကို အလယ္ တည့္တည့္ထား ၍ ကိုးနဝင္း ႐ိုက္ၿပီး တည္ခဲ့ပါတယ္ေလ။ဖ်ာပုံကို ဗဟိုျပဳၿပီး ဖ်ာပုံပတ္ပတ္လည္မွာ ႀကီးနဲ႔ ဆုံးတဲ့ ႐ြာႀကီး (၉)႐ြာ၊ ေလးနဲ႔ ဆုံးတဲ့ ႐ြာႀကီး(၉)႐ြာ ပတ္ကာဝိုင္းလို႔တည္ခဲ့တာပါ။ဥပမါအေနနဲ႔ေျပာျပရင္…..သလိတ္ႀကီး၊သလိတ္ကေလး။အျခားႀကီး အျခာေလး၊မေငးႀကီး၊မေငးေလး၊စေသာ အဲဒိလိုလို ႀကီး နဲ႔ဆုံး ေလးနဲ႔ ဆုံးတဲ့ ႐ြာေတြ ေပါ့။ေရွ႕အဆက္ဆက္ မြန္ အေခၚအေခါေတြက ယေန႔အခ်ိန္က်န္ရစ္ေနဆဲပါ။
ေရွ႕ဘက္ကမ္း၊အေနာက္ဘက္ကမ္းေပါ့။အခုအေရွ႕ဘက္ကမ္းဆိုတာက မြန္ျပည္နယ္ ေရး စတဲ့ ေနရာကိုေခၚေဝၚသမုတ္ခဲ့တာေပါ့၊အေနာက္ဘက္ကမ္း ဆိုတာက ယခု ဖ်ာပုံၿမိဳ႕ကို အေနာက္ဘက္ကမ္းလို႔ ေခၚေဝါ သမုတ္ခဲ့တာပါ။ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ အံေတာ္သမိုင္းကို ခဏေလး ထားလိုက္ပါေတာ့ ရွည္သြားမွာဆိုးလိုပါ။အဲဒိအခ်ိန္မတိုင္ကတည္း က ဖ်ာပုံ မွာ ျမတ္စြာဘုရား အံေတာ္ႏွင့္ ဆံေတာ္ တစ္ဆူ ကိမ္းဝပ္ခဲ့တယ္ သမိုင္းရွိခဲ့တယ္၊၊အဲဒိသမိုင္း က ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္၊ဘယ္ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္ ။ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္းက ေနၿပီး ျမတ္စြာဘုရား ဆံေတာ္ ပင့္ခဲ့တာေလ။
ေခတ္အဆက္ဆက္ မသမားသူေတြရဲ႕ ခိုးယူလုယက္မႈေတြ ခံခဲ့ရမည္စိုးးရိမ္ေသာေၾကာင ့္္ ေရွးဘုရင္မ်ားနဲ႔ ရေသ့ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဆက္ ဆက္ လုံျခဳုံစိတ္ခ်ေသာ ေနရာေတြေျပာင္းေ႐ြ႕ကိမ္းဝပ္ ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ယခုဖ်ာပုံၿမိဳ႕ ေခ်ာင္းတြင္းေက်း႐ြာ ျမတ္ဘုန္းပြင့္ျမတ္စြာဘုရား ႀကီး ပရဝန္း၌ သမိုင္းအရ ဖ်ာပုံမင္းေက်ာင္း မွ ေျပာင္းေ႐ြ႕ ကိမ္းဝပ္ေတာ္မူေနသည္မွာ နစ္ေပါင္းရာခ်ီေနပါၿပီ။ယေန႔ ဘုန္းဘုန္းေလ်ာက္ထားၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ခြင့္ ပူေဇာ္ခြင့္ ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။သမိုင္းသုေသန ဦးစီးဌာန မွလည္း အံေတာ္အစစ္ မဟုတ္မဟုတ္ သုေတသနလုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္အံေတာ္ အစစ္ျဖစ္ပါကလည္း
နစ္ရာေထာင္ခ်ီကိန္းဝပ္ေနေသာဖ်ာပုံၿမိဳ႕ကေလးမွာေနာင္လာေနာင္သားမ်ား သာသနာျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားေပးပါရန္။ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းနင့္တကြ ပူေဇာ္ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရႏိုင္ရန္အတြက္ တင္ေပး လိုက္ပါတယ္။ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ ရတဲ့ အခ်ိန္ ကံစပ္ လို႔ သမိုင္းတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ႏိုင္ပါၿပီ။ အတည္ျပဳဖို႔က သမိုင္းသုေတသန ကပါ။ဆက္လက္ၿပီး ေရွ႕ေဟာင္း သမိုင္းဝင္ေတြ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
ကံထူး လို့ဖျာပုံသူဖျာပုံသား များ နှင့် မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ ဖူးချိန်တန် ဖူးထိုက်လို့. ဖူးမျှော်ခွင့်ရလို့ ထင်ပါပြီ။ကျွန်တော် ကလေး ဘဝတည်း က ဘိုးဘိုး ၊ဘွားဘွား၊ဘိုဘေး အစဉ်အဆက် ကတည်း က ဖျာပုံမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား အံ့တော် နှင့် ဆံတော်တစ် ဆူ ကိမ်းဝပ်နေတယ် လို့ သိခဲ့ရပါတယ်။လူအများနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ သင့်ကို လက်ခံဖို့ ချစ်ခင်ဖို့ ဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်- မလိုအပ်ဘူးထင်ပြီး သင့် ရဲ့ဆက်ဆံပုံ ဆက်ဆံနည်း လွဲမှားသွားခဲ့ရင်တော့ သင် မိတ်ပျက်ပါပြီ- ဒါကြောင့် ဒီ ဗီဒီယိုလေးကိုသာ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်ရှေးဟောင်းသမိုင်းအစဉ် အလား အရ ရှေးကျတဲ့ မြို့တွေက အမည်နှစ်လုံးတည်း နဲ့ အမည်ပေးခဲ့တဲ့ တချိန်က မွန်ဒေသတွေပေါ့။
ပုဂံ၊ရန်ကုန်၊တွံတေး၊ဒလ၊သထုံ၊ဖျာပုံ၊ပုသိမ်၊စတဲ့ ရှေးကျတဲ့ မြို့တွေ အများကြီးပေါ့။အဲအထဲမှာ မွန်ဘုရင်များ အဆက်ဆက် အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ ဖျာ ပုင်း ဆိုတဲ့ ထမင်းဈေးမြို့ကလေး တစ်ခုလည်း ပါဝင်ခဲ့တာပေါ့။ကျိုက်ပတိုင်း စေတီ တော်မြတ်ကြီးကို မြန်မာ သက္ကရာဇ်(၆၀၀)ခုနှစ်မှာ တည်ထားကိုး ကွယ်ခဲ့တယ်။လုပ်ဥကုန်ကျိုက်ခမွမ် စေတီတော်ကို မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၉၀၀)ခုနှစ် မှာ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတစ်နိုင်ငံ လုံးမှာ ရှိတဲ့ မြို့ပေါင်း များစွာမှာ ခရေပင်ဇောက်ထိုးပါက်တဲ့ မြို့ဆိုလို့ ဖျာပုံမြို့ တစ်မြို့ပါဘဲ။ဖျာပုံက ရှေးဘုရင်တွအဆက်ဆက် အုပ်စိုးခဲ့စဉ် က ရန်ကုန်၊ဒလ အပိုင်းပေါ့။ဖျာပုံကို မွန်ဘုရင် အဆက်ဆက် က အောင်မြေ လို့ သက်မှတ်ခဲ့ကြတယ်၊
ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။ဖျာပုံကို မင်းဘေးရေဘေးအစရှိတဲ့ ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကင်းလွတ်စေရန် ကင်းဝေးစေရန်အတွက် ရှေ့ထုံးနန်းစဉ်လာအရ ။ဖျာပုံကို အလယ် တည့်တည့်ထား ၍ ကိုးနဝင်း ရိုက်ပြီး တည်ခဲ့ပါတယ်လေ။ဖျာပုံကို ဗဟိုပြုပြီး ဖျာပုံပတ်ပတ်လည်မှာ ကြီးနဲ့ ဆုံးတဲ့ ရွာကြီး (၉)ရွာ၊ လေးနဲ့ ဆုံးတဲ့ ရွာကြီး(၉)ရွာ ပတ်ကာဝိုင်းလို့တည်ခဲ့တာပါ။ဥပမါအနေနဲ့ပြောပြရင်…..သလိတ်ကြီး၊သလိတ်ကလေး။အခြားကြီး အခြာလေး၊မငေးကြီး၊မငေးလေး၊စသော အဲဒိလိုလို ကြီး နဲ့ဆုံး လေးနဲ့ ဆုံးတဲ့ ရွာတွေ ပေါ့။ရှေ့အဆက်ဆက် မွန် အခေါ်အခေါတွေက ယနေ့အချိန်ကျန်ရစ်နေဆဲပါ။
ရှေ့ဘက်ကမ်း၊အနောက်ဘက်ကမ်းပေါ့။အခုအရှေ့ဘက်ကမ်းဆိုတာက မွန်ပြည်နယ် ရေး စတဲ့ နေရာကိုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တာပေါ့၊အနောက်ဘက်ကမ်း ဆိုတာက ယခု ဖျာပုံမြို့ကို အနောက်ဘက်ကမ်းလို့ ခေါ်ဝေါ သမုတ်ခဲ့တာပါ။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အံတော်သမိုင်းကို ခဏလေး ထားလိုက်ပါတော့ ရှည်သွားမှာဆိုးလိုပါ။အဲဒိအချိန်မတိုင်ကတည်း က ဖျာပုံ မှာ မြတ်စွာဘုရား အံတော်နှင့် ဆံတော် တစ်ဆူ ကိမ်းဝပ်ခဲ့တယ် သမိုင်းရှိခဲ့တယ်၊၊အဲဒိသမိုင်း က ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်၊ဘယ်ကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် ။ပင်လယ်လမ်းကြောင်းက နေပြီး မြတ်စွာဘုရား ဆံတော် ပင့်ခဲ့တာလေ။
အခု ဖျာပုံ ကော့မှူး-တွံတေး -ဒလ လမ်းတလျောက်မှာရှေ့ဟောင်းစေတီတွေ အမြောက်အများ၊အဲဒိလမ်းအတိုင်း မှာ ရှိတဲ့ ဆံတော်ကြိုစေတီတော် ရှိတယ်တယ်လေတွံတေးမှာပေါ့။ထားလိုက်ပါတော့ အခုဖျာပုံမှာ ရှိတဲ့ အံတော်က မြတတ်စွာဘုရား အံတော်လို သိရတယ်။ဖျာပုံမှာ ကိမ်းဝပ်နေတာ နှစ်ပေါင်း ရာပေါင်းမက ကိမ်းဝပ်နေတာ ပါ။အံတော် ဘယ်ကကြွလာလည်း ဆိုတော့ ရသေကြီးတစ်ပါး က ယခု သရက်မြို့နယ် ပေါ့။အဲဒိအချိန်တုန်းကတော့ တောကြီးဖြစ်နေရင် ဖြစ်နေမှာပါ။အဲဒိမြို့အပိုင် ရွာကလေးတစ်ရွာ တောထဲ တရားထိုင်အားထုတ်နေစဉ် တော်နက်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ထုံးဖြုစေတီ အပျက်ကြီးထဲကနေ ရောင်တော်တွေ ကွန့်မြူးနေ လို့ရသေကြီးတစ်ပါးကပင့်ဆောင်ပူဇော်ခဲ့ရာ ဖျာပုံ ယခုမင်းကျောင်း၊ သိုသိုသိပ်သိပ် ကိမ်းဝတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
ခေတ်အဆက်ဆက် မသမားသူတွေရဲ့ ခိုးယူလုယက်မှုတွေ ခံခဲ့ရမည်စိုးးရိမ်သောကြောင ့်် ရှေးဘုရင်များနဲ့ ရသေ့ ဆရာတော်ကြီးများအဆက် ဆက် လုံခြုုံစိတ်ချသော နေရာတွေပြောင်းရွေ့ကိမ်းဝပ် ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။ယခုဖျာပုံမြို့ ချောင်းတွင်းကျေးရွာ မြတ်ဘုန်းပွင့်မြတ်စွာဘုရား ကြီး ပရဝန်း၌ သမိုင်းအရ ဖျာပုံမင်းကျောင်း မှ ပြောင်းရွေ့ ကိမ်းဝပ်တော်မူနေသည်မှာ နစ်ပေါင်းရာချီနေပါပြီ။ယနေ့ ဘုန်းဘုန်းလျောက်ထားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့် ပူဇော်ခွင့် တောင်းခဲ့ပါတယ်။သမိုင်းသုသေန ဦးစီးဌာန မှလည်း အံတော်အစစ် မဟုတ်မဟုတ် သုတေသနလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်အံတော် အစစ်ဖြစ်ပါကလည်း
နစ်ရာထောင်ချီကိန်းဝပ်နေသောဖျာပုံမြို့ကလေးမှာနောင်လာနောင်သားများ သာသနာပြုနိုင်ရေးအတွက် စဉ်းစားပေးပါရန်။ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနင့်တကွ ပူဇော်ဖူးမျှော်ခွင့်ရနိုင်ရန်အတွက် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ခွင့်ပြုချက် အရ ကျွန်တော်ရဲ့ ဖူးမျှော်ခွင့် ရတဲ့ အချိန် ကံစပ် လို့ သမိုင်းတစ်ခုကို ဖော်ထုတ် ခဲ့နိုင်ပါပြီ။ အတည်ပြုဖို့က သမိုင်းသုတေသန ကပါ။ဆက်လက်ပြီး ရှေ့ဟောင်း သမိုင်းဝင်တွေ ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။